Iyo iPhone 7 inogona kunge isina yechipiri mutauri mushure mezvose | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 inogona kunge isina yechipiri mutauri mushure mezvose
Imwe yezvinhu zvitsva zvinonakidza izvo zvinosvika padhuze ne iPhone 7 chichava mutauri wechipiri, kana zvakadaro takafunga kusvika nezuro. Uye ndiyo MacRumors hizo kucherechedza kuti, kunyangwe chiri chokwadi kuti chingave chiri chokwadi, chakandirwadza - handisi kutaura izvi nekuda kweblog. Vezvenhau veAmerica vakaona iyo anonzi mapepa mugadziri weiyo inotevera iPhone uye vakaona kuti havana kutaura mutauri wechipiri, kana isiri mic, asi ichi handicho chega chiratidzo chinokanganisa tariro yedu yekuti iyo iPhone 7 inopa kurira kuri nani pasina mahedhifoni.
Chinhu ndechekuti, mune iwo magwaro haataure nezve mutauri mukuru futi, saka izvi hazvifanirwe kureva chero chinhu. Asi kana iwe ukatarisa kune imwe ye inopa izvo zvakaburitswa kare kare tinogona kuona kuti iyo Makomba emutauri wechipiri anotarisirwa anovharirwa, ndiko kuti, vaizongova chete zvekuti iyo mufananidzo weiyo iPhone 7 pazasi yaive yakaenzana. Asi pachave nemutauri wechipiri here kana pasina wechipiri mutauri?
Ko zvakadii mutauri wechipiri weiyo iPhone 7?
Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti izvi hazviratidzike zvakanaka zvachose, handidi kuzorasa tariro zvachose. Sezvakaita chero kudonha, zvakafanira kuramba usina chokwadi kusvika paratidziro yepamutemo yeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Zvakare, iwo mufananidzo uri pamusoro we inonzi chitunha iPhone 7 ine maburi emutauri wechipiri kubva muchikamu kuenda muchikamu, chimwe chinhu icho, kana chiri mufananidzo chaiwo, chinoita kuti tifunge kuti kuchave nemutauri wechipiri.
Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, isu zvakare tinofanirwa kuyeuka kuti izvo zvekutanga zvakaburitswa izvo zvakaburitswa zvaive zvakaita, izvo izvo zvaive zvisina gomba kunze kweye maikorofoni. Ndinodawo kukuyeuchidza izvozvo OnLeaks Akataura kuti vangadai vakasarudza pamuenzaniso nevatauri vaviri, kunyangwe zvichikwanisika kuti chavangadai vakasarudza chichava dzimba dzinoenderana mupfungwa iyi. Kuti ubvise kusahadzika kupi nekupi, isu tinongomirira isingasviki mwedzi
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 inogona kunge isina yechipiri mutauri mushure mezvose
Roberto Amezcua akadaro
Ini ndinofunga kuti chete iyo iPhone 7 Pro ndiyo yaizove nematauri maviri uye nehunyanzvi hweiyo iPad Pro ...
Pindura kuna Roberto Amezcua
asi ngatione ... iwe ungafunge sei kuti maburi iwayo achave zvishongo ... chinhu chisina maturo chaicho kwese kwaunotarisa, pawebhu rese izvi zvatoita kunge jee hazvishamise iyo Salvame yakaiswa nerunyerekupe. ye iphone mu internet uye ini ndinofunga hapana chavanoita kunze kwekukuvadza mufananidzo.
iwo maburi ndeechimwe chinhu zvinoita sekunge Apple haizivikanwe, zvese zvine tsananguro.
Pindura kuna siluX
Dai pakupedzisira pakanga pasina wechipiri mutauri pamwe nekufungidzirwa kutsakatika kwejack kuteerera mimhanzi kuburikidza nemahedhifoni uye nemutengo wekupedzisira unosvika chiuru chemazana euros mushanduro yekutanga, vangazvimba kutengesa zviteshi. Ipapo Tim Cook achabuda achiruramisa kudzikira kwekutengesa sezvaakaita neiyi batch yekupedzisira, achipokana ini handizive kuti ndezvipi zvisina maturo zvekushanduka kwemisika pane kusada kuziva kuti mhosva ndeyake uye kuti Apple irikurasikirwa zvakare Zvakaitika neMicrosoft uye zvichaitika neGoogle nekuda kwesarudzo dzisina kunaka. Ipapo Steve Jobs akadzoka, asi ndiani achadzoka mumakore mashoma kuzodzosera kambani? Nekuti sezvo isiri Bill Gates ... uye ini handimuone webasa.
DMD Panorama, yemahara kwenguva shoma
Cydia Eraser inovandudzwa nerutsigiro rweIOS 9.3.3